Baños, pearl zoro ezo na Ecuador | Akụkọ Njem
Baños, pearl zoro ezo na Ecuador
Mariela Carril | | Ecuador, Ihe ị ga-ahụ
Ecuador ọ bụ obere obodo mana ọdịdị ala ya mara mma na ndị na-ekpo ọkụ bụ ndị maara otú e si anabata ndị njem nleta. Zoro na ndagwurugwu n'ógbè Tungurahua bụ obodo a na-akpọkarị Ebe mmiri dị nsọ nke ndi mmadu na-ekwu Ụlọ ime ụlọ.
Ọ bụrụ na ihe omume na-amasị gị n'èzí, rafting, trekking, hiking, nnụnụ na-ekiri Na ụdị ụdị ahụ niile, yabụ Baños bụ otu n'ime ebe ndị Ecuador nke anyị na-atụ aro kachasị site na Actualidad Viajes.
1 Ebe mmiri dị nsọ
2 Ihe ị ga-eme na Baños
3 Kedu ihe ọzọ ị ga-eme na Baños
Ebe mmiri dị nsọ
Ọ bụ ebe magburu onwe ya ebe ihe dị ka puku mmadụ iri na atọ bi. Ndụ site na njem na A na-ewu ya na mkpọda ugwu mgbawa, Tunmgurahua, karịa mita 1800. Ọ bụ ezie na ọ bụ ezigbo iru mmiri ihu igwe dị mma n'afọ niile na ọdịdị bụ onyinye kasị mma gburugburu ebe a.
A na-akpọ ebe ahụ Baños de Agua Santa n'ihi na, dịka ị ga-eche na ịdị nso na ugwu mgbawa, enwere mmiri oku. Ekwenyere na ha bụ mmiri ọrụ ebube, ọbụlagodi oge nke mmetụta Dominican na mpaghara ahụ, ọnụnọ nke dị kemgbe ọtụtụ narị afọ. Enweghị ntọala ụbọchị ọ bụla, kama ọ na-amụba ma na-eto ka ndị mmadụ rutere, ndị India, ndị Spen, mestizos.
Baños nwere mmekọrịta chiri anya na okpukpe, dịkwa ka ọ na-adịkarị, ọ na-arụ ọrụ ebube n'oge otu ugwu mgbawa nke gbara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ọkụ ... belụsọ otu nwa agbọghọ na-amaghị nwoke. O wereghi otutu ihe iji kwuputa oru ebube na ahia n’otu oge. Na nkenke, mmepe obodo nke Baños mere na narị afọ nke iri na itoolu na Ọ ghaghị ịwughachi ya ọzọ mgbe ala ọma jijiji 1949 gasịrị. Ọ bụ na ugwu mgbawa ka nọ n'ọrụ ...
Ihe ị ga-eme na Baños
Ọfọn, nwee ọdịdị ya mere naanị ndị njem nleta hụrụ n'anya egwuregwu n'èzí. Ọ bụ ebe ahụ ka onyinye ahụ gbadoro ụkwụ. Enwere oghere, okpu, ụgbọ mmiri, ịwụnye eriri, ịrịgo, ịga njem. Otu puku njegharị a haziri ahazi nke na-akpọrọ gị ebe a gaa ebe a na-eme ihe ndị a niile na njedebe nke ụbọchị hapụ gị n'ụra.
Rafting bụ ọtụtụ ihe ọchị. Get banyela n’ime mmiri, mana ọ bụ ihe ọchị. Osimiri Pastaza nwere usoro rapids dị mma o ọcha mmiri ya mere ị nwere ngwa ngwa ịnshọransị klaasị III ruo IV, ezigbo ogwu adrenaline ruo awa ole na ole ịkwọ ụgbọ mmiri na ịwụ elu ma nwee mmiri. Osimiri ahụ mara mma, ndị nduzi bụ ndị ọkachamara, odida obodo dị ebube na ihe niile na-agwakọta iji nwee ọ timeụ. Ọnụego ya gụnyere njem, akụrụngwa, ntuziaka, na nri ehihie.
Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye njegharị a ka ọ kacha mma ịmara ọtụtụ onyinye tupu ị kpebie.
Mee kanopi mgbe niile dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị na-amasị elu. Ndagwurugwu Baños dị mma nke ukwuu ịga ije ọ bụ ahụmịhe dị mma. The echiche dị ukwuu. N'ozuzu, njem ahụ na-efu n'etiti $ 15 na $ 20, mana ọ dabere na ma ọ gụnyere nri ehihie, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ oge ole ịchọrọ ịfe elu.
Baños odu ekpere Amazon yabụ nnukwu ọhịa a na-ewu ewu na-adọta gị bụ ezigbo ebe ịmara ya. Amazon bụ otu awa na ọkara site na Baños na ọ bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu njegharị. I nwere ike ime ya otu ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị atọ ma ọ bụ anọ njegharị ma bie ahụmahụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ oke ọhịa, ịgagharị n’ọtụtụ ụbọchị ga-aka mma n’ihi na njem otu ụbọchị ga-abụkwa azụmaahịa (ịga n’obodo ndị dị n’ime ime, ụfọdụ ọrụ omenaala, ụgbọ epeepe dị mkpirikpi, wdg). Mana ịnọ otu abalị ma ọ bụ karịa abaghị uru.
Nwere ohere karịa ị ga-ahụ anụ ọhịa nke a na-ahụkarị n'ọhịa ma ọ bụ ịsa ahụ na nsụda mmiri nke onye ọ bụla na-amaghị ma ọ bụ mụta banyere ahịhịa nke ebe ahụ. Ọ bụghị na njegharị ndị a adịchaghị njem nleta mana ha zuru oke. Njegharị ụbọchị atọ dị ihe dịka $ 200 yana njem, nnabata, nri, yana ntuziaka. N'ezie, njem ọ bụla na-amalite ebe a na-amalite na $ 100. Ọ bụghị ụdị kachasị mma nke Amazon, site na Quito enwere ije dị mma, mana ọ bụ nhọrọ Baños na-enye.
Ọzọkwa i nwere ike ime ATV agafe ebe ọ bụ na obodo ahụ na-agbazinye onwe ya ihe ịtụnanya maka nke ahụ n'ihi na enwere ọtụtụ ụzọ aga njem. «Zọ ‘’ Waterfalls ’’ bụ otu n’ime ihe kachasị mma n’ihi na mmiri mmiri ahụ dị mma karịa nke ọzọ. A na-akwụ ụgwọ quadricycle site na elekere ma n'eziokwu ọ dị oke ọnụ karịa igwe kwụ otu ebe. Kedu ihe ọzọ ị nwere ike ime? Ọfọn, n'akụkụ osimiri, n'akụkụ dị jụụ, ị nwekwara ike kayak na canoeing. A na-emekwa ya paragliding, jumping, ịnyịnya, trekking na biking ugwu.
Kedu ihe ọzọ ị ga-eme na Baños
Na ngalaba nke gara aga anyị lebara anya na ọrụ ndị a na-eme n'èzí mana n'eziokwu Baños nwere ike inye anyị karịa. Ọ nwere agba Obodo ahịa nke bụ n'ezie uru ileta n'ihi n'ime e nwere ọtụtụ ụlọ na-ere nri ma ọ dị ọnụ ala ihe niile. A na-akpọ nri mpaghara na -achọE ghere eghe chorizo ​​na pancakes, ihendori na akwa nke a na-eji osikapa arụ ma ọ na-atọ ụtọ. Enwere mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri dị oke elu.
Lọ Osisi bụ ebe dị egwu n'ihi na o nwere nnukwu hammock. Na-akwụ ụgwọ naanị dollar ịbanye ma ị hụ ụlọ osisi mara mma n'osisi ahụ, nwere nku abụọ n'akụkụ abụọ, nke ọ bụla nwere mkpọda ị nwere ike ịgbanye n'elu kpọmkwem rim nke kaniyon. Adabaghị maka ndị obi na-adịghị ike, ee. N'ezie, anyị agaghị echefu ihe kpatara eji akpọ Baños Baños: mmiri ọkụ.
Baños nwere ọdọ mmiri dị iche iche nke mmiri na-ekpo ọkụ site na ọrụ mgbawa dị nso. Site n'ọtụtụ ọrụ ndị a na-eme n'èzí, itinye mmiri ọkụ na-atọ ụtọ ma na-atụ aro. Enwere spa dị ezigbo mma Luna Runtun Spa nke nwere echiche kacha mma. Ọdọ mmiri anọ nwere ọdọ mmiri na-ekpo ọkụ dị ihe dị ka $ 20 ruo $ 30 kwa onye. Zuo ike!
N'ikpeazụ, n'abalị, ndụmọdụ anyị bụ ka ị were ụgbọ ala abalị gaa ugwu ugwu ugwu Tungurahua ma nwee ọmarịcha echiche nke Baños n'abalị. Ọ bụ Chiva Bus ma nwee ihu ọma ị nwere ike ịgafe n'akụkụ osimiri lava. Ejegharị ahụ dị ihe dịka dollar 5 na abalị ọ bụla nwere ụzọ dị iche iche.
Ọ bụrụ n’ikpebie ịga leta Ekwedọọ, hapụ Baos ka ahapụghị ya ụzọ gị. Ọ bụ anyị chọrọ na nkwanye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Ecuador » Baños, pearl zoro ezo na Ecuador
Withgagharị na snow na ụmụaka